Gaslọ ọrụ na-ahụkarị gas - China Single gas detector Manufacturers, Suppliers
Ngwa: JCB4 obere combustible gas detector bụ ngwa ọrụ nchekwa na mgbawa na -emepụta ya iji gbochie gas na-ere ọkụ. JCB4 gas detector bụ ọnụ ala dị ala, na-enweghị nkwụnye gas na-arụ ọrụ iji chebe ndị ọrụ site na ikuku gas na-ere ọkụ na ọnọdụ kachasị njọ. N'agbanyeghị oke nha, JCB4 gas Detector gụnyere njirimara na-ahụkarị naanị na nnukwu multi-gas monitors gụnyere nnukwu, ngosi OLED, inte ...
obere nchọpụta sọlfọ dioxide CELH50
Nọmba Model: CELH50 Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agba akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo Ngwa: Single SO2 detector is intrinsically safe and blast-proof proof and is designed to deter SO2. Otu onye na-enyocha ihe gbasara SO2 bụ ihe na-akwụ ụgwọ, na-enweghị nkwụnye gas na-arụ ọrụ iji chebe ndị ọrụ site na ikpughe gas SO2 dị egwu n'ọnọdụ kachasị njọ. N'agbanyeghị ogo ya, otu nchọpụta SO2 na-agụnye atụmatụ ndị a na-ahụkarị naanị m ...
Onye nchọpụta O2 oxygen
Nọmba Model: CYH25 Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agbawa akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo Ngwa: Portable O2 detector bụ intrinsically mma na mgbawa na-egosi na ngwá na e mere na-egbochi O2. Onye nchọpụta O2 a na-ebugharị bụ ọnụ ala na-enweghị nkwụnye gas na-arụ ọrụ iji chebe ndị ọrụ site na ikpughe O2 dị egwu na ọnọdụ kachasị njọ. N'agbanyeghị oke nha ya, onye nchọpụta O2 Portable gụnyere atụmatụ a na-ahụkarị na l ...
Amonia Gas NH3 Nyochaa JAH100
Model ： JAH100 Qualities ： Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agba akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo Okwu Mmalite Onye na-achọpụta ammonia bụ ngwa elektrọnik iji chọpụta ịba amonia na gburugburu ebe ị ga-ebu gị. Mgbe ịchọpụta na ịta amonia na gburugburu ebe obibi ruru ma ọ bụ karịa uru esetịpụrụ mkpu, onye nchọpụta ammonia ga-ezipụ ụda, ọkụ na ịma jijiji. Ọ na ọtụtụ-eji iche iche nke col ...
JHB4 Methane CH4 detector
Iru eru: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ na-egosi Asambodo Nnyocha Asambodo Model: JHB4 Ngwa: Infrared Combustible Gas Detector bụ intrinsically mma na mgbawa-àmà ngwá ọrụ na e mere iji gbochie Combustible Gas ịta na ikuku ikuku nọgidere na ngwa ngwa. Ọ na - ejide teknụzụ infrared NDIR nwere oke ziri ezi yana nzaghachi ngwa ngwa. Ọnụọgụ gas nke Combustible (CH4) bụ 0-5.0% ma ọ bụ 0-100% vol. N'agbanyeghị ya kọmpat size, na Infrared Co ...
obere H2 hydrogen Detector CQH100
Nọmba Model: CQH100 Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agbawa akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo Ngwa: H2 Detector enwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma yana ihe mgbawa na-egosipụta ma kee ya iji gbochie H2. Onye na-enyocha H2 nwere obere ọnụ, na-enweghị nkwụnye gas na-arụ ọrụ iji chebe ndị ọrụ site na ikpughe gas H2 dị egwu na ọnọdụ kachasị njọ. N'agbanyeghị oke nha ya, onye nchọpụta H2 na-agụnye atụmatụ ndị a na-ahụkarị na ...
Hydrogen Sulfide mmetụta / H2S Mita
:Dị ihe atụ: GLH100 Ngwa: GLH100 H2S Mita nwere ike na-agbanwe ma na-akpaghị aka ịgbanwe ala oghere H2S ka ọ bụrụ akara eletriki ọkọlọtọ wee kesaa ya na ngwaọrụ ndị dabara na ya. Ọ nwere ike igosi ịta nke methane na ọnọdụ ma ọ nwere ọrụ nke mkpọtụ na-enweghị atụ na ọhụụ na-ahụ anya. Ọ nwere ike ijikọ na usoro nlekota oru, mmebi na ikuku ikuku gas mkpọchi. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe na-arụ ọrụ coal, na-arụ ọrụ ihu igwe na eletriki na igwe ...
Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agbawa akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo Ngwa: Infrared CO2 detector bụ intrinsically nchekwa na mgbawa na-egosi ngwa ọrụ na ezubere igbochi CO2 itinye uche na ikuku ikuku na-aga n'ihu na ngwa ngwa. Ọ na - ejide teknụzụ infrared NDIR nwere oke ziri ezi yana nzaghachi ngwa ngwa. Ọnụọgụ gas nke CO2 bụ 0-5.0%. N'agbanyeghị ogo ya, ihe nyocha CO2 Infrared CO2 gụnyere atụmatụ ndị a na-ahụkarị naanị n'ọtụtụ buru ibu ...
Portable CO carbon monoxide Detector
Nọmba :dị: CTH1000 CTH2000 CTH5000 CTH10000 Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Explosion-proof Asambodo Nnyocha Asambodo Ngwa: Portable CO detector bụ intrinsically mma na mgbawa na-egosi na ngwá na e mere na-egbochi CO. - n'efu otu nyocha gas nke ezubere iji chebe ndị ọrụ site na ikpughe CO gas dị egwu na ọnọdụ kachasị njọ. N'agbanyeghị oke nha ya, ihe nchọpụta ihe eji ebugharị CO na-agụnye featu ...
CL2 Chlorine Gas Gas Nyocha JLH100
Asambodo: Coal Mine Safety Certificate Bọmbụ gbawara agbawa akaebe Asambodo Nnyocha Asambodo Model: JLH100 Okwu Mmalite Usoro ọrụ nke chlorine gas detector: Usoro ọrụ nke ihe elektrọnkemike sensọ bụ ịchọpụta oke gas ịgbasa. Nye ihe nchọpụta gas kachasị mma, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, dị mfe iji, sie ike ma sie ike. Ngwongwo plastic ahụ siri ike nwere ike ịnagide ọdịda na nkwekọrịta nke nwere ike ime na saịtị; nnukwu ihuenyo ...